192.168.1.1 Login Admin, Dib u celi Guide password iyo Dejinta
MAC OSX – LINKSYS wireless router HOME QAABKA
model gaarka ah iyo qaabeynta hoos ku qoran waxaa loogu talagalay router Linksys WRT54G oo la iibiyaa Techstore DoIT ah (Linksys WRT54G)
Macluumaad dheeraad ah waxaad ka heli Linksys’ website at: www.linksys.com
Setup aad router adigoo raacaya tilmaamaha iman waxaa la. Tani waxay ku lug yeelan doontaa unpacking router ah, waxaa deeruhu galay bareesada darbiga oo la isticmaalayo cable ka bixisey si ay u xirmaan aad DSL ama modem Cable.
Waayo, ujeedooyinka qaabeynta fudud, Waxaa si weyn lagu talinayaa in aad isticmaasho cable ethernet iyo xirmaan computer aad la si router si toos ah iyadoo la isticmaalayo doonaa. Taas ayaa ka dhigaysa wax sahlan marka aad soo gashid goobaha waxaan iyaga ku badbaadin router. Waxaad ku meel gaar ah u isticmaali karaan cable ka bixisey ethernet kaliya qaabeynta. U hubso in uu ordo cable ka soo dekedda ethernet ka on your computer in mid ka mid ah 4 dekedaha tiriyey on dambe ee router ah, oo aan ku biiray ee ku tilmaamay 'Internet'.
Mac Note: Ha loo soo dajiyo software ka mid ah CD ah in yimaado sanduuqa. Tani waa adag tahay in la iska indha maxaa yeelay Linksys baxa si ay u saaray warqad ku badan dekedaha ku yaala gadaasha dambe ee router, kaas oo uu dhigayaa waa in aad 'Run CD First'. Si kastaba ha ahaatee, software ka on halkaas looma baahna waayo, mashiinada Macintosh.
Ka dib markii laadyo ilaa router iyo ordaya cable ethernet dekedda ethernet your computer ayaa mid ka mid ah dekadaha tiriyey on dambe ee router ah, abuurtaan browser web a iyo nooca in “http://192.168.1.1” duurka goobta. Markaas riix 'noqo’ muhiimka ah.
la keeneen in Waa in aad login la username iyo password, waayo, router ah. by default, router Linksys soo dhigay oo aan magacaaga iyo isgarad-la 'admin'. Waa in aanad gelin wax gelin 'Magaca’ field. Iska daa in maran iyo nooca 'admin’ gelin 'Password’ beerta iyo riix 'Log In’ muhiimka ah.
Ka dib markii aad gashid, aad arki doonaa bogga Setup aasaasiga ah. Waa in aad soo bandhigaan la beero magaca router ah, hostname, Magaca domain iyo sidoo kale IP address macluumaadka. Uma baahnid in aad si ay ula qabsadaan wax kasta oo waxyaalahan marka laga reebo Magaca router. Waa in aad ku qor wax duurka this in macno aad u. Note, this MA waa magaca in la baahin doonaa helitaanka wireless.
Ka dib markii magaca galaan aad router, xaqiiji inaad riix Save Settings button on hoose ee bogga. Haddii aad joojiso in aad browser ka hor sidaas samaynaya, dhammaan isbeddellada lagu lumin doonaa.
Click on the wireless tab sare ee bogga inay soo qaadaan ee 'Settings Wireless aasaasiga ah’ menu. Waxa ugu weyn ee aad u baahan tahay in ay halkan soo geli waa 'Magaca Network Wireless (SSID).’ Tani waa waxa lagu baahin doonaa macaamiisha aad wireless. Soo qaado wax dareen ka dhigi doonaa adiga iyo dadka kale in ay doonayso inaad helitaanka aad router wireless. Hubi in mar kale riix Save Settings button ka dib markii aad qortid magacaaga doortay.
Halkaa marka ay marayso waxaad la kulmi kartaa qaabeynta iyo bilaabin isticmaalka aad router wireless. Waxaanu si adag kuugu dhiiri si ay awood password a on qaybta wireless aad network. In sidaa la yeelo, waxaad soo socda u baahan doontaa inaad riix wireless Security tab. Si aad u noqoto socon Macs iyo mashiinada ku salaysan Windows, waa in aad u dhigay 'Security Mode’ si WPA Personal la isticmaalayo geynta TKIP ah. Nooca in password ka mid ah ugu yaraan 8 characters iyo ka tago 'Group Key Renewal’ beerta sida caadiga ah. Ka dib doorashada fursadaha kuwan, xaqiiji inaad riix Save Settings button hoose.
Waxaad ayaa dhameystirtay awood ammaanka wireless router on your. Waxaa si weyn lagu talinayaa in aad bedesho password default ee aad ka 'admin router’ wax aad jeclaato si Anonymous sahlan kuma ay heli kartaa router. Si arrintan loo sameeyo, tagaan si ay u Maamulka tab sare ee bogga qaabeynta aad router. Waxaad arki doonaa in ay galaan beeraha password cusub (laba jeer) ka dibna mar kale hubi in aad riix Save Settings.
Boonooyinka AAD network wireless
Qaybtani waxa ay ugu dambeysay ee aad ku socdaa iyada oo boonooyinka iyo helitaanka internet-ka iyada oo aad router wireless.
Si aad u bilaabaan, hubiyo in haddii aad isticmaali cable ethernet ah la siiyaa router ee qaabeynta intial kor ku xusan, in aad kugu xidho cable iyo mid dhamaadka furaysto galay danbe ee DSL ama modem Cable (ama xidhiidh kale oo internet) iyo mid ka mid dhamaadka gelin 'Internet’ dekedda aad router. Tani waxay u ogolaaneysaa in aad router si ay u wadaagaan xiriir internet aad la KASTA iyo ALL mashiinada hadlaya aad router, in iyada oo loo marayo ethernet ama wireless. Tallaabooyinka gaar ah ee hoos ku qoran heshiiska la Mac OS X, laakiin mashiinada Windows sidoo kale ka heli kartaa router wirelessly.
Dooro router sida helaan dhibic wireless. Riix icon ee geeska sare gacantiisa midig ee Mac u eg hirarka wireless ka soo baxay hal dhibic. Click on this iyo in la hubiyo in Airport rogmatay ON (Airport: On waa in cawl oo kale tusaale ahaan sawirka hoos ku qoran).
Fiiri qodobada helaan wireless heli karaa ku qoran oo aad ka heli router in liiska. 'xayeysiis’ waa mid ka mid ah ka tusaalaha kore. Hubi in aad u muujiyo iyo riix magaca si ay u doortaan.
Marka aad riix on your helaan dhibic, aad la codsaday in ay galaan a WPA Password Personal. Ku qor password aad u qaybiyay hore aad ammaanka wireless.
Waxaad hadda waa in la wirelessly ku xiran internetka. Isku day furitaanka ilaa browser aad jeceshahay oo aad tijaabiso xirnaanta.
TP Mudanayaasha link router
192.168.l.254 IP Address - Default router Admin & Password login
cinwaanka IP The 192.168.1.254 waa cinwaan gaar ah IP taas oo macnaheedu yahay kor u la qabsan doonaa in ay kala duwan oo gaar ah oo loo celiyey ka IANA sida kala duwan ee gaarka loo leeyahay. Guud ahaan, marka aan iibsato router cusub ama modem ay bixiyaan magacaaga iyo isgarad-. This username and … [Continue reading] about 192.168.l.254 IP Address – Default Router Admin & Password login
192.168.0.1 login ID & password– 192.168. ah. 1 Settings
qalab kasta oo ku xiran yahay web hubaal yeelan doono cinwaan IP ah. Ciwaanka IP: ga waxaa loo yaqaan Address Nidaamka internetka Wixii qalab kasta oo, waxaa jira tiro ka mid ah IP ka hadlaya sida dadweynaha iyo sidoo kale cinwaanada shakhsiyeed. There … [Continue reading] about 192.168.0.1 login ID & password– 192.168. ah. 1 Settings
192.168.1.1 login Page, username, Password oo Wireless goobaha
Ciwaanka IP: ga ayaa waxaa loo isticmaalaa verities mid ah sababaha. Inta badan cinwaanka IP waa lagama maarmaan si ay u gasho in router ah, username iyo password ayaa sidoo kale loo baahan yahay cinwaanka IP ee login in router ah. cinwaanka IP The 192.168.1.1 is a Private IP address and … [Continue reading] about 192.168.1.1 login Page, username, Password oo Wireless goobaha